I-China YF-2001 Lift-Top Coffee Amathebula Akumangaza Ngendlela Engcono Kakhulu Yomkhiqizi Nomphakeli | Yifan
Ngokuvumelana negama layo, itafula lethu lekhofi eliphefumulelwe maphakathi nekhulu leminyaka lifaka phezulu okuzivelelayo ukuveza indawo yokugcina efihliwe. Isiphetho sayo se-walnut veneer sigcwaliswa phezulu kweqabunga lemabula ukuthola isikhala esengeziwe sokubeka amashalofu - silungele ukuthola izincwadi ngesikhathi sokuhlangana okulandelayo.
Phakamisa itafula lekhofi lokugcina eliphezulu linikeza isitayela nesitoreji sendawo yakho yokuphila yanamuhla. Ukuhlanganiswa kwayo okukhaliphile kwezinto kunezela ukuthinta kwemfudumalo kanye nesitayela esibushelelezi ekamelweni lakho lokuhlobisa ngokhuni olubushelelezi lwokhuni nokuqedwa okumpunga okucwebezelayo. Itafula lonke liyaphakama ukuveza indawo yokugcina engezansi, elungele ukufihla kude ama-remotes, ama-coasters, kanye nempahla yemidlalo. Umehluko ophelele emigqeni egobile neqonde
I-LIFT TOP DESIGN: Itafula lethebulethi lingaphakanyiswa kalula futhi lidluliselwe phambili ukwakha indawo yokusebenza, indlela esezingeni eliphakeme yenza ukuba phezulu kwetafula kuphakanyiswe noma kwehliswe phansi ngokungazami nangomsindo; ngaleli tafula eliphezulu lokuphakamisa izinto eziningi, awudingi ukuncika phambili kanzima ukuze usebenzise i-laptop yakho, bhala noma udle etafuleni ngenkathi uziphumulele kusofa
ISIPEYA SOKUGCINA: Igumbi elifihlekile ngaphansi kwaphezulu lenzelwe ukugcina izinto zakho ezivame ukusetshenziswa njengamagazini, i-laptop, i-chess, izilawuli kude, izilawuli zemidlalo njalonjalo, ukuzigcina zihamba kahle futhi zingenakho ukungcola; ishalofu eliphansi elivulekile lingabamba izingubo zokulala, ukudla okulula noma ama-knick-knacks
ISOLID & STABLE: Leli thebula lekhofi lenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-P2 ehambisana ne-MDF nensimbi, isakhiwo esiqinile futhi esizinzile ngeke sintengantenge futhi sikwazi ukubamba ama-68 kg / 150 lb esewonke
ISITAYILI SOMINIMALIST: Leli thebula lesimanje futhi lesimanje lilula ngokuma futhi linombala we-chic, lingahambisana ngokuphelele nesitayela negumbi lakho lokuhlobisa; itafula lekhofi elisebenzayo nelilihle ezindaweni ezincane, lisebenza kahle egumbini lokuphumula nasehhovisi
Umhlangano ongenazinkathazo: Uza nayo yonke i-hardware edingekayo kanye nencwajana yokufundisa enemifanekiso ukukusiza ukusetha leli thebula lekhofi phezulu ngokushesha futhi ngaphandle kobunzima.
Langaphambilini Amasethi egumbi lokuhlala lesikhumba i-YF-H-907
Ithebula lekhofi eliguquguqukayo
Ikhofi Ithebula Nge Adjustable Phakamisa-Phezulu
Phakamisa Ithebula Eliphezulu Lekhofi
Ubuningi Bemisebenzi Ithebula Lekhofi